बाइबलको वचन - परमेश्वरको मण्डली विश्व सुसमाचार समाज
हामीलाई मुक्तिको निम्ति शिक्षा दिने बाइबल (२ तिमो ३:१५) ।
त्यसभित्र रहेको परमेश्वरको साँचो इच्छालाई अध्ययन गरौं ।
सत्यताको परिचय - के ‘फरक’ भन्नाले ‘गलत’ भन्ने अर्थ हो र ?
कुनै कुरा फरक हुँदैमा त्यो गलत छ भन्ने अर्थ होइन । ‘फरक’ र ‘गलत’ भन्ने शब्दलाई हेर्दा उस्तै अर्थ भएजस्तो देखिए तापनि वास्तवमा यी दुईबीच धेरै भिन्नता छ । शब्दकोशमा ‘फरक’ भन्ने शब्दलाई ‘दुवै वस्तु उस्तै नभएको’ भनेर वर्णन गरिएको छ ।
ख्रीष्टियानले लिनुपर्ने सद्‌गुणको बारेमा बाइबलले कसरी शिक्षा दिएको छ होला ?
हामीले कस्तो बोली बोल्नुपर्छ होला ? (२)
शबाथ-दिनको तयारी कसरी गर्नुपर्छ होला ?
विज्ञानलाई पनि नाघेको ‘सृष्टिकर्ताको अभिलेख’ हेरौं ।
जस्तो बुबा, त्यस्तै छोरा
बुबा-आमाबाट पाइने आयु
शरीरको तापक्रमलाई कायम राख्दै
बाइबलमा उल्लेखित कहानीहरूले अहिलेका हामीलाई कस्तो शिक्षा दिन्छ ?
पवित्र आत्माले डोऱ्याउनुभएबमोजिम
त्यस जवान अब्शालोमसित नरम व्यवहार गर्नू
“मलाई आदर गर्नेलाई म आदर गर्नेछु”